Iray ao amin’i Kristy
"Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao Ahy, mba ho iray izy, tahaka ny mahiray antsika." - Jao. 17:22,
Ahitantsika fanambarana mandresy lahatra tokoa ao anatin'ireo teny ireo, izay manaporofo fa ny firaisana, ny halemem-panahy, ary ny fitiavana, dia miseho eo amin'ireo izay tena Kristianina. Misandratra, omem-boninahitra eo amin'ny toetr'izay rehetra mino Ilay Mpanavotra izao tontolo izao (...) Ny vokatra lehibe rehetra miseho eto amin'izao tontolo izao dia miankina amin'ny firaisana misy eo amin' ireo izay milaza ny tenany ho Kristianina, dia ireo izay milaza ny finoany ny maha-Tenin'Andriamanitra tokoa ny Baiboly. — YI, 2 Nôvambra 1894.
«Imanoela, amintsika Andriamanitra.» Endrey izany Andriamanitra miaraka amintsika ao amin'i Kristy Jesôsy, amin'ny dingana rehetra izay ataontsika amin'ny dia mankany an-danitra! Endrey ny Fanahy masina miaraka amintsika amin'ny maha-Mpampahery Azy, Mpitari-dalana ao anatin'ny fotoan-tsarotra, manamaivana ny alahelontsika, ary mampialoka antsika raha sendra miatrika fakam-panahy! «Endrey ny halalin'ny harena ny amin'ny fahendrena sy ny fahalalana an 'Andriamanitra! » (...) Kolokoloy ny fitiavana, fongory ny ahiahy, ny fitsiriritana, ny fialonana, ary ny eritreri-dratsy sy ny fitenenan-dratsy. Miaraha miroso, miaraha miasa toy ny olona tokana.
[...] Avereno vakina hatrany ny Jaona 17. Io vavaka izay natolotry ny Mpamonjintsika ny Rainy ho an'ny mpianatra io dia mendrika haverina matetika, ary hampiharina eo amin'ny fiainana. Izy io no hanarina ny olombelona lavo satria ny Tompo efa nampanantena fa raha toa isika mitahiry io firaisana io, dia ho tia antsika tahaka ny nitiavany ny Zanany Andriamanitra; ho voavonjy ny mpanota, ary homem-boninahitra mandrakizay Andriamanitra.[...] — L 31,1892.